Fitaingam-pamokarana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no fomba handrafetana voninkazo tsara tarehy?
Ireo mpahay sary dia afaka nampiasa ny fifanoheran-java-manify tamin'ny vato mavesatra sy ny voninkazo marefo mahavariana mba hamoronana sary mamirapiratra sy mahafinaritra. Ankehitriny, ity lamaody lamaody ity dia nanandratra ny paikany tamin'ny famolavolana zaridaina, zaridaina ary toeram-ponenana. Manamboara fandriana misy vato azon'ny olona tsirairay.
Ahoana ny fomba hanamboarana masomboly oregano, indrindra ny fambolena zavamaniry mamy
Ankoatra ny ovy, tongolo sy voatabia, fandriana any amin'ny firenena dia ilaina ny manangona herisetra sy zavamaniry toy ny oregano (oregano). Ankoatra ny dite sy ny sakafo matsiro, dia hanampy amin'ny fiarovana ny zaridaina avy amin'ny bibikely ary ho tonga lafatra izy io. Raha efa nieritreritra an'izany ianao, eto ambany dia hianatra momba ny oregano, ny fambolena sy ny fiahiana azy.
Fitomboan'ny oregano (oregano): fambolena sy fikarakarana ny orinasa any an-trano
Oregano na oregano dia zavamaniry isan-karazany mahatratra hatramin'ny 60 santimetatra avo, tapa-bolana, maingoka, maniry eo amin'ny fotony. Ny ravina vita amin'ny ravin-tsavony dia mihamitombo tsiroaroa, mifanohitra amin'ny fefy kely kely. Ny voninkazo madinika misy lila na fotsy fotsy dia toy ny lefom-pihobiana mampihomehy. Ny firafitry ny oregano ao amin'ny chimique dia misy ianiana iankinan'ny aina, vitaminina C sy B6, antioxidants ary tasy, izay ahafahan'ny zavamaniry manitra sy fanasitranana tsara.
Ahoana no ahafahana maniry voa avy amin'ny fambolena sy fiahiana ao an-trano
Matetika, tia mikraoba ny zavamaniry sy zavamaniry. Faharatsiana amin'ny fisafotofoto toy ny feon'ny anaran'ny herisetra. Nefa ny savary sy ny thyme dia manana ny toerany araka ny tokony ho izy ireo zava-manitra tsy fahita firy. Misy karazana karazana telopolo mahery manerana izao tontolo izao. Ny zavamaniry dia malaza amin'ny fofom-boankazo matsiro, izay misy menaka tena ilaina.
Ireo singa famafy voanjo ho an'ny ririnina
Parsley dia zavamaniry isan-tsokajin'ny Parsley avy amin'ny fianakaviana Umbrella izay misy ravin-kazo mahitsy sy matevina, maitso maitso matevina, voapoizina. Manana ascorbic acid, vitamin B, retinol, riboflavine, vy, potassium, magnesium, pactine sy phytoncides. Matetika izy io no ampiasaina amin'ny endrika maina sy mofomamy ho an'ny tsiro sy ny fikarakarana, ary ampiasaina amin'ny lovia avy amin'ny legioma, hena, trondro maina ary lalao.
Mitombo cilantro avy amin'ny voa, fanoloran-tena ho an'ny mpamboly novokarina
Ny Cilantro na ny koriandra dia zava-mahadomelina malaza, indrindra fa ny mponina any amin'ny faritra atsinanana izay efa nitombo nandritra ny taona maro. Ampiasaina toy ny zava-manitra ho an'ny sakafo isan-karazany izy io: hena, legioma, sokatra, ary mena, ao anaty salady. Ny koriany zavamaniry dia manana fofona mahafinaritra izay tsy azo ahetsiketsika amin'ny zava-drehetra.
Ny mahasoa ny marjoram: fananana mahasoa sy fanafody mahatsiravina
Sakafo, menaka, dite, menaka - tsy natao afa-tsy ny marjoram. Malaza manerana izao tontolo izao ny Spice, ary tsy dia misy sakafo antoandro hividianana azy. Nanomboka nampiasa azy io ny taonjato maro lasa izay. Ankoatr'izay dia maro ny fampiharana azy io, ary mbola tena lehibe. Hatramin'izao, marjoram dia ampiasaina amin'ny fitsaboana aretin-tsaina marobe, hita ihany koa ny fampiharana azy amin'ny cosmetology sy amin'ny lalana hafa.
Fomba mahasoa sy fampiasana safrona (crocus) amin'ny fitsaboana nentim-paharazana
Maro ny olona no nandre momba ny savony safrona, saingy tsy ny tsirairay no nanana fahafahana hanandrana izany - mitranga ny vidin'ny vidiny. Ity ity zava-mahamay ity izay heverina ho lafo indrindra eto amin'izao tontolo izao, izay nohamarinina na dia tamin'ny fidirana ao amin'ny Guinness Book Records aza. Ny vidin'ny transzendana amin'ny safrofana dia hazavaina amin'ny teknolojian'ny famokarana matanjaka be: ilaina ny manangona izany amin'ny tanana, ary kely ny vokatra azo avy amin'ny faka (10 kg isaky ny ha ha).
Fambolena sy fikarakarana dill amin'ny varavarankely, fomba hanamboarana volomparasy ao anaty vilany iray
Ny fampiroboroboana ny taova dia mahaliana sy mahasoa. Azonao atao ny mampitombo ny ahitra eo amin'ny varavarankelinao manokana. Na dia vilany tsotra na boaty misy zavamaniry matsiro eo amin'ny varavarankelinao aza dia hanomboka tsara. Dill, mitombo amin'ny tanany, dia antoka ho an'ny tsy fisian'ny zavatra mampidi-doza ao amin'ny voly. Ahoana no hambolena dill avy amin'ny voa eo amin'ny varavarankelinao ary horesahina ato amin'ity lahatsoratra ity.
Mitombo arugula eo amin'ny varavarankelin'ny taona
Ny Italiana dia tsy misolo tena ny sakafony tsy misy arugula, ary vao haingana dia tsy misy fambolena sy lafo vidy. Androany dia azonao atao ny mividy azy ao amin'ny fivarotana, ary lasa malaza kokoa izany. Ny arugula aromata sokatra ho an'ny salady dia afaka mitombo tsy misy olana amin'ny varavarankely ao an-trano.
Ny fampiasana arugula: ny soa sy ny loza
Arugula (Eruka, Indau) niseho vao haingana teo amin'ny latabatra, saingy azo antoka fa haka ny toerany izy ary lasa malaza kokoa. Ny fijerena ireo sangan'asa amin'ny sakafo italiana sy Mediterane dia maro no tsy mahatsapa akory hoe inona no tombony ananan'io voninkazo mahafinaritra io. Momba ny arugula amin'ny ankapobeny, ny tombontsoa sy ny fahasarotan'ny fampiasana azy, hifanakalozantsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Mamoaka fahavaratra ho an'ny ririnina: ny fomba tsara indrindra
Sarotra be ny olona mieritreritra fa mahandro tsy misy fampiasana ahi-maitso. Ankoatra ny fisian'ny sakafo matsiro sy mamy ho an'ny sakafo isan-karazany, dia toy izany koa ny fivarotana sakafo mahavelona. Noho izany, ny persily dia misy tsiranoka avo efatra heny noho ny citrony. Ary amin'ny 100 g of spinach dia 25% ny vy avy amin'ny fitsipika isan'andro ilaina ho an'ilay olona.
Mangatsiaka ny ririnina amin'ny ririnina: ireo sakafo tsara indrindra
Ny fakana aina dia fomba tena tsara hanangonana sakafo amin'ny ririnina. Ny mpivahiny dia nampiasaina hanondrana legioma, voankazo, voankazo, zavamaniry, volomparasy. Izany dia ahafahana mamelona ny vatana amin'ny vitaminina manan-danja sy zavatra hafa mahasoa amin'ny ririnina, rehefa sarotra ny mahazo legioma sy voankazo vaovao.
Tombontsoa mahasoa sy fanimbana ny cassia (kanelina sinoa)
Manolotra kavina vita amin'ny pèl na bun, maro no mahatsapa ny fofom-bozaka sy ... fofona kanelina. Io zava-manitra io dia miorina tsara eo amin'ny tsiron-tsaintsika ary mihamitombo hatrany hatrany. Ny fanangonam-bokatra tsy dia fantatra loatra dia ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy Cassia, izay, na izany aza, efa nibodo ny tsena anatiny, saingy mbola tsy toerana voafaritra tsara ao an-tsain'ny mpanjifa, ary noho izany dia misy fifandirana maro manodidina izany.
Tselatra avy amin'ny zava-manify sira: inona no ilaina, ahoana no hisotroana sy hisotro, inona no azo ampiasana, iza no tsy afaka
Melissa (lemon mint) dia malaza amin'ny fananana fanasitranana, izay fantatra nandritra ny fahagolan-tany. Raha efa nisakafo ianao, dia mety tsy hampangorohoro ny menaka manitra sy ny tsiro fofona amin'ny zavatra hafa. Ny endrika mora sy tsotra ary mahazatra mahazatra dia mamoaka dite.
Cinnamon: inona no ilaina, inona no manampy, aiza no manampy, ahoana no ampiharana
Eoropeanina maro no mifampizara kanelina miaraka amin'ny zava-mahadomelina manitra izay ampiana hanitra, salady voankazo sy salady. Saingy amin'ny fampiharana an'izao tontolo izao, ny fampiasana zava-manitra dia tsy voafetra amin'izany. Ao amin'ny lakozia avy amin'ny firenena samihafa, izy io dia manampy amin'ny hena, trondro aspika, fitsangatsanganana, lalao voalohany, tsindrin-tsakafo, karazana pieds, marinades.
Fanafody maro ho an'ny aretina maro. Ny fitsaboana ny prostatitika amin'ny tongolo lay
Ny zava-mahadomelina "Bipin" ho an'ny tantely: doses sy fomba fitantanana
Maniry tsimparifary izahay ao an-jaridaina sy ao an-trano: fikarakarana sy sary
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fitaingam-pamokarana